Warbixin”Loolanka Doorashada Koonfur Galbeed | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Warbixin”Loolanka Doorashada Koonfur Galbeed
Warbixin”Loolanka Doorashada Koonfur Galbeed
Muddo bil ah ka dib waxaa la qaban doonaa doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayadoo haatan ay u muuqato in tartankaasi uu noqon doono mid adag oo ay isaga hor imaanayaan Madaxweynaha xilka haya, Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo muddo dheer caan ku ahaa inuu si wacan u dheeli jiray shaxda siyaasadeeed ee Soomaaliya, iyo musharrixiin ka mideysan inay xilka ka qaadaan.
Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka:
“Doorashadan waxay noqoneysaa furinta ugu horreysa ee dagaallada isdaba joogga ah ee dhexmari doono Golaha ay ku bahoobeen maammul goboleedyada iyo dowladda federaalka,”sidaas waxaa sheegay Dr Abdiwahab Abdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Maamul Goboleedyada ayaa dhowr jeer oo hore dowladda federaalka ku eedeeyay inay faragelin ku hayso, balse dowladda wax jawaab ah arrintaasi kama bixin.
Dr Abdiwahab ayaa sheegay in “Shariif Xasan uu haatan noqday agoon siyaasadeed, ka dib markii uu meesha ka baxay nidaamkii Tigreega ee dalka Itoobiya,”
Waxaa uu sheegay in arrintaasi ay yareysay fursadda uu leeyahay Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo uu sheegay in haatan uu daciif yahay marka la barbardhigo musharrixiinta kale ee uu sheegay inay ka miisaan culus yihiin.
Qadar iyo Iimaaraadka
Loollanka dhanka awoodda ee Maaamul Goboleedyada iyo dowlada federaalka ayaa ka billowday ka dib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay dhex-dhexaad ka yihiiin khilaafka khaliijka, taas oo ay maamul goboleedyadu ku diideen, iyagoo codsaday in dowladda ay dhinaca Iimaaraadka u janjeerto maadaama ay sheegeen in ganacsiga Soomaalida uu ku xiran yahay Imaaraadka Carabta.
Maamul goboleedyada ayaa markii dambe sheegay in dowladda ay ku dhaqmi wayday dhexdhexaadnimada ay ku dhawaaqday billawgii colaadda Khaliijka.
Haddaba dadka wax indha-indheeya waxay sheegeen in haatan “loollanka ugu weyn uu u dhexeyn doono Shariif Xasan Sheekh Aadan oo taageero ka helaya dalka Imaaraadka Carabta iyo musharixiin dhowr ah oo laga shakisan yahay inay Qadar taageerto”, sidaasi waxaa sheegay Dr Abdiwahab Abdisamad, oo intaas ku daray in labada dhinac ay ku dhex loollamayaan Soomaaliya.
Ilaa haatan waxaan weli la samaynin guddi doorasho oo ay yeelato Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo murashixiinta qaarkood ay ka walwalsan yihiin arrintaasi.
Dr Ibrahim Bursaliid oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in howshaasi ay u taallo guddiga doorashada Qaran oo laga doonayo inay sameeyaan guddi maxalli ah, oo musharixiintu wakiillo ku darsadaan.
“Waxaa dhici karta inuu khilaaf ka dhasho guddiga doorashada Koonfur Galbeed haddii aan loo sameyn si ay raalli ka wada noqon karaan dhammaan dhinacyada isku haya doorashada”, sidaasi waxaa yiri Dr Bursaliid.
Musharrxiinta qaar ayaa tuhunsan madaxweynaha xilka hayo ee Shariif Xasan, waxaynna ka cabsi qabaan in guddi la’aanta ay isaga dan ugu jirto, maadaama xildhibaannada wax dooranaya ay yihiin kuwii hore loo soo xulay markii uu Sharifka ku awoodda badnaa siyaasadda gobolka.
Musharrixiin kala duwan
Dr Ibrahim Bursaliid ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee uu Shariif Xasan soo wajahay tartan culus, kaas oo ay suuragal tahay in looga adkaado.
Bursaliid ayaa sheegay in marka laga reebo Shariif Xasan, ay musharrixiinta kale u muqdaan inay ku mideysan yihiin sidii xilka looga qaadi lahaa,
“Abu Mansuur, Lafta Gareen oo aan weli ku dhawaaqin musharaxnimadiisa iyo agaasimihii hore ee NISA Xuseen Cismaan ayaa haatan ugu cad-cad oo Shariifka gilgili kara” ayuu yiri Dr Bursaliid.
Dr Abdiwahab Abdisamad ayaa dhankiisa sheegay in doorashadan ay calaamad u tahay waxa ku dhici doono madaxda maamul goboleedyada kale, iyadoo laga warsugayo in Shariif Xasan laga adkaan doono iyo in kale.
Waxaa uu leeyahay haddii laga adkaado Shariifka, madaxda maamul goboleedyada kale waxay noqonayaan “ninkii qayrkiis loo xiirayow soo qoyso” oo way adkaan doontaa siday uga badbaadaan musharxiiinta cusub ee isbaddel doonka ah.